Abavelisi beeNdawo zokuThintela izandla kunye nabanikezeli - China Isikhululo seZitishi sokuhlamba izandla
Umzi mveliso ngokuthe ngqo ukuThumela ngaphandle uMthamo oMkhulu woBunzima bokuKhanya kwesithuthi ngaphambili
Isikhululo se1 .Hand Isizukulwana sesithathu songeze amavili: 1) itephu yevali kwitanki yenkunkuma ukuqhagamshela kumbhobho. 2). ngebhodi ephezulu kwitanki yenkunkuma ukubeka umatshini kunye nebhokisi lephepha. 3) .inokusetyenziswa ngabantu ababini ngaxeshanye. 4) .ngamavili kwitanki lenkunkuma ukuze kube lula ukuyiphatha. 2.Iinkcukacha 3.Project 4.Packing Ukuba umthengi akanayo iimfuno ezizodwa, siya kupakisha ngokwendlela yokupakisha eqhelekileyo; ukuba ufuna ukutshintshela ku ...
Isikhululo sokuhlamba izandla iHDPE seplastiki esiphathwayo kwimisitho yangaphandle yomnyango
Isikhululo sokuhlamba 1.Hand Isizukulwana sesithathu songeze amavili: Inkonzo: 1.24 iiyure ngeyure ukuya kwenye iinkonzo ze-intanethi ziqinisekisa inkxaso efanelekileyo. 2.Kwiqela leenjineli zofakelo lobuchwephesha ezikhoyo kumazwe angaphandle. Ukwamkelwa kwabathengi okuqwalaselweyo kubhukisho lwehotele ukuya kutyelelo lwasefektri. Ukhathalelo 4.Excellent ukusuka isiqinisekiso odolo ukuthunyelwa imveliso. Iinkcukacha 2.Iinkcukacha 3.Iprojekthi 4.Ukupakisha 5.Ukusetyenziswa
Ukuhlamba yangaphandle kwePlastiki yeSinki kunye neZiko lokuHamba lokuHamba kweZandla
Isikhululo sokuhlamba i-1.Hand Isizukulwana sesithathu songeza amavili: 1.Ngetekhnoloji yokujikeleza izinto, ukuhlamba izandla kunamandla kwaye kuzinzile. 2.Clean tanki lamanzi kunye netanki lamanzi inkunkuma inokudityaniswa okanye yahlulwe. Ubungakanani 3.Small kunye nobunzima ukukhanya, kulula ukuba baphathe. 2.Iinkcukacha 3.Iprojekthi 4.UkuPakisha
iplastiki ephathekayo yesinki yeHDPE yokuhlamba izandla kumnyhadala wangaphandle
Isikhululo sokuhlamba i-1.Hand Singoyena mthengisi mkhulu wezikhululo zokuhlamba izandla e-China Mobile. Sisekwe iminyaka eli-12 ngaphezulu kwama-5,000 amatyala aphesheya kwezilwandle.Iinkonzo zethu zibandakanya: izindlu zangasese eziphathwayo, izitishi zokuhlamba izandla, indlu yomchasi; Indlu eneemodyuli njalo-njalo Singazenza zonke iimfuno zakho! Isixhobo: Ubungakanani be-HDPE: 800mm * 470mm * 1360mm Ubunzima: 35kgs uhlobo lwangasese: N / A Amandla azimeleyo: 85L Itanki yokubamba inkunkuma: 90L indawo yokuhlamba izandla EWE Ezothutho: 51units / 20GP ...